musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Saudi Arabia Kuputsa Nhau » Sputnik V Vaccine, kiyi nyowani yeSaudi Arabian Tourism
Kufamba kwekushanya • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Russia Kuputsa Nhau • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Vanhu vokuRussia vanofarira kufamba. Nenguva isipi avo vanobaiwa neSputnik V vanogona kuwedzera Saudi Arabia kune yavo bhaketi runyorwa. Izvi zvinosanganisirawo Hajj, uye Umrah nzendo kubva kumatunhu akawanda.
Humambo hweSaudi Arabia hwakapa mvumo yekupinda kwevanhu vakabaiwa neRussia Sputnik V yekudzivirira kutanga kubva Ndira 1, 2022.
Saudi Arabia yakabatana nedzimwe nyika zana nembiri dzakabvumidza kupinda kwevanhu vakabaiwa nejekiseni reSputnik V zvichitevera kudyidzana kwakanyanya uye nhaurirano pakati peBazi rezvehutano reSaudi Arabia neRDIF, zvichitsigirwa nebazi rezvekudyara nyika.
Kupihwa mvumo kweSputnik V yakabaiwa kuti ishanyire Saudi Arabia uye mamwe matanho akabatana mukurwisa denda iri mumusangano pakati peGurukota rezvehutano reSaudi Arabia Fahad Al-Jalajel, Gurukota rezvekudyara kweSaudi Arabia Khalid Al-Falih uye RDIF CEO Kirill. Dmitriev muRiyadh pakutanga kwaNovember.
Sarudzo yasvika ichagonesa maMuslim kubva pasi rese kubaiwa neSputnik V kuti vatore chikamu muHajj neUmrah nzendo kunzvimbo dzinoyera dzechiIslam mumaguta eMecca neMedina.
Kana vapinda munyika, vanhu vanobaiwa neSputnik V vanozosungirwa kugara vega kwemaawa makumi mana nemasere uye kutora bvunzo dzePCR.
Nyika dzinovhura miganhu yadzo kune avo vakawana mushonga weSputnik V vari kuratidza kuda kubatsira indasitiri yavo yekushanya nemabhizinesi kuti adzoke nekukurumidza. Sezvo Saudi Arabia inovhura miganhu yayo kune iyo Sputnik V vaccine, iyi sarudzo ichaita basa rakakosha mukuwedzera kuyerera kwevashanyi uye kumisikidza hukama hutsva hwebhizinesi pakati peRussia neSaudi Arabia, kusanganisira kuburikidza nezviitiko zveThe Russia-Saudi Economic Council.
Yakavambwa muna 2019, Kanzuru ine chinangwa chekusimudzira hukama hwehupfumi nekutengeserana pamwe nekudyara pakati peRussia neSaudi Arabia muzvikamu zvese. Inotungamirwa naKirill Dmitriev, CEO weRDIF, uye HRH Muchinda Abdullah bin Bandar bin Abdul Aziz, Gurukota rezveVarindi reHumambo.
Pakazere, kupatsanura mvumo yeCCIDID vaccine kubva pazvitupa zvekudzivirira nderimwe danho rakakosha kudzivirira rusarura rwekudzivirira uye kutsigira kuedza kwehurumende mukuvhurazve miganhu zvakachengeteka kune vese vagari venzvimbo nevashanyi.
Zvinodiwa zvakakosha zvenyika zana nembiri dzinobvumidza kushanya kunotevera jekiseni reSputnik V[*]:
Sputnik V vaccinated vanhu vanogona kushanyira huwandu hwe31 nyika pasina imwe yekuwedzera COVID-19 mvumo ine chekuita;
Dzimwe nyika makumi manomwe nenomwe dzinokumbira yakaipa PCR kana bvunzo dzeantibody kana kuva nezvimwe zvinodiwa pakupinda.
Nyika gumi neshanu chete dzinoda majekiseni kunze kweSputnik V. Nyika shanu chete dzenyika idzi (isingasviki 15% yenzendo dzekunze kwenyika), kusanganisira US (inomiririra isingasviki 5%), inovimba zvizere neiyo WHO yakatenderwa runyorwa rwemajekiseni ayo Sputnik V ari. inotarisirwa kuwedzerwa gore rino.
Zvinyorwa: shumiro dzenyika dzakasiyana, nzvimbo dzekushanya
* Visa uye (kana) imwe mvumo yekupinda inodiwa, Munhu anofanirawo kusangana nezvimwe zvinodiwa zvisingaenderane nezvinorambidzwa coronavirus. Kuongororwa kwemikana yekupinda kunoenderana nezvinodiwa kune huwandu hwenyika zhinji, uye zvinogona kusaratidza zvirambidzo kana kuregeredza kuri kushanda kune dzimwe nyika dzakasarudzwa kana mamwe mapoka. Nyika makumi maviri nenomwe dzichine miganhu yakavharirwa vashanyi vanobva kune dzimwe nyika zhinji